सकियो पर्खाईकाे घडि, अन्ततः भोलिबाटै कोरोना विरुद्धको औषधी बजारमा ल्याउँदै रूस! – PathivaraOnline
Home > अन्तराष्ट्रिय > सकियो पर्खाईकाे घडि, अन्ततः भोलिबाटै कोरोना विरुद्धको औषधी बजारमा ल्याउँदै रूस!
admin August 11, 2020 August 11, 2020 अन्तराष्ट्रिय, प्रविधि, स्वास्थ्य	0
मस्को । रुसले कोरोना विरुद्धको खोप आफुले निर्माण गर्न सफल भएको दाबी गरेको छ । के अब यसले कोरोना भाइरस विरुद्धको लडाँइलाई जित्नसंसारभर रुसले बनाएको भनेको यो खोपबारे निकै चर्चा चलिरहेको छ । रुसले भोलि १२ अगस्टमा कोरोना विरुद्धको खोप दर्ता गर्ने जनाएको छ ।रुसका उपस्वास्थ्य मन्त्री ओलेग ग्रीडनेभले १२ अगस्टमा कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप दर्ता गर्ने र आगामी महिनाबाट उत्पादन सुरु गर्ने जानकारी दिनुभएको छ ।
उहाँले खोप बताउनुभयो । यो खोप रक्षा मन्त्रालय र गामलेया रिसर्च इन्स्टिच्यूटले संयुक्त रुपमा विकास गरेका हुन् । रुसले मानिसमा गरिएको अन्तिम चरणको खोपको परीक्षण सफल भएको र छिट्टै बजारमा खोप ल्याउने बताएको छ । जुन १८ देखि क्लिनिकल ट्रायल भएको थियो । परीक्षणमा सहभागी सबैको रोग प्रतिरक्षा विकास भएको पाइएको थियो । पहिलो चरणको परीक्षणमा सहभागि भएकालाई जुलाई १५ र दोस्रो चरणकोलाई जुलाइ २० मा डिस्चार्ज गरिएको थियो ।
नेपालमा शुरू भएकै हाे त यस्तो दशा? विश्व बैकले नेपाललाई दियो डरलाग्दो चेतावनी !